Fold Galaxy wuxuu horey u leeyahay taariikh rasmi ah oo lagu dhawaaqi doono | Androidsis
Samsung waxay xaqiijineysaa taariikhda la bilaabay Galaxy Fold
Toddobaadyo ka hor Saadaalinta taariikhda la sii daayo ee Galaxy Fold. Waxaa la ogyahay in telefoonka ayaa laga bilaabi doonaa berri Koonfurta Kuuriya, inkasta oo aan waxba laga ogeyn bilaabashadeeda adduunka intiisa kale. Samsung ugu dambeyntii waxay xaqiijineysaa soo saarista taleefankan Yurub. Horaa loo shaaciyey goorta taleefankan laga furayo Yurub.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa taariikhaha sii deynta ee Fold Galaxy suuqyo kala duwan, sidoo kale kiiska Spain. Intaas waxaa sii dheer, qiimaha uu taleefanku ku yeelan doono labadiisa nooc waa la xaqiijiyay. Maaddaama ay jiri doonaan qaab caadi ah iyo nooc leh 5G taleefankan oo ka socda astaanta Kuuriya.
Xanta ayaa tilmaamtay a bilowga dhammaadka Sebtember. Gabi ahaanba khalad ma aysan aheyn, laakiin taariikhaha way ka duwan yihiin. Laabkii Galaxy waxay ka bilaabmi doontaa Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska bisha Sebtember 18. Shirkadda lafteeda ayaa horay u shaacisay. Marka laga hadlayo Spain, waa inaan sugnaa ilaa bartamaha Oktoobar, waxay ka soo waramayaan Samsung.
Intaa waxaa dheer, qiimahooda waa la xaqiijiyay. Sida taleefanka waxaa lagu furay qiimo dhan € 2.000 qaabkeedii caadiga ahaa. Nooca taleefanka ee leh 5G waxaan rajeyneynaa qiimo € 2.100. Markaa waxaan horeyba u haysannay macluumaadkan sidoo kale si rasmi ah, oo ay ku xaqiijisay shirkadda lafteeda.
Shaki la'aan, tani waa daqiiqad muhiim u ah Samsung, kadib bilooyin dhibaatooyin ah Fold Galaxy-ka. Isbedelada oo dhan waa la dhameystiray taasna ugu dambeyntii waxay u oggolaaneysaa dhammaadkan sare inuu diyaar u yahay in lagu bilaabo suuqa. Suuqyada qaarkood waxay noqon doontaa xaqiiqo in ka yar laba toddobaad.
Isbaanishka waa inaan in yar sugno si aan u soo iibsanno Fold Galaxy. Shirkadda ayaa sheegtay in markay yeeshaan taariikh cayiman ay shaacin doonaan. Marka toddobaadyo yar gudahood waan ogaan doonnaa maalinta saxda ah ee taleefankan isku laaban uu bilaabi doono. Ma naqaano haddii labada nooc ee taleefanka la furayo iyo in kale Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung waxay xaqiijineysaa taariikhda la bilaabay Galaxy Fold
Apple wuxuu sii wadaa inuu ku tiirsanaado taleefannada casriga ah ee ka hooseeya 5 inji